Buyisela iphasiwedi yesizinda sakho sezindiza uma ungayikhumbuli | Ngivela kwa-mac
Phinda uthole iphasiwedi yesizinda sakho sezindiza
UMiguel Angel Juncos | | Izesekeli, Izifundiswa
Zonke izisekelo zesikhumulo sezindiza, njengamanye ama-routers, zinokukhethekile kokuvikela iphasiwedi izilungiselelo zenethiwekhi nemininingwane yokuxhuma ukuze kungabikho muntu ongaziguqula ngaphandle kokwenza le nqubo kuqala, kepha kwenzekani uma sikhohlwa iphasiwedi?
Ngokuvamile, esingakwenza ukuba kube yindlela eqonde kunazo zonke kungaba ukuqala ukuzama amaphasiwedi ahlukile futhi ngemuva kwemizamo embalwa engaphumelelanga, iya ku setha kabusha isikhumulo sezindiza ngokomzimba ukuyiguqula kabusha ngokuchitha isikhathi okujwayelekile ukuyishiya njengoba yayinjalo.
Lokhu akusamele kube njalo ngenxa yensizakalo yama-keychain i-OS X enayo futhi esingakwazi ukusuka kuyo bheka iphasiwedi oyinikiwe Inqobo nje uma sazi, yebo, iphasiwedi yethu yomlawuli wesistimu, iphasiwedi eyinkimbinkimbi kakhulu ukuyikhohlwa ngoba isetshenziswa kakhulu cishe kunoma yisiphi isenzo esiguqula kancane noma iyiphi inketho yesistimu.
Ukuze wenze lokhu, isinyathelo sokuqala kungaba ukufinyelela ifolda Izinsiza> Ukufinyelela kwe-Keychain. Lapho sesingene ekufinyeleleni kwesihluthulelo, sizobheka iphasiwedi esiyifunayo, zombili i-disk yenethiwekhi esiyixhumanise ne-Airport Extreme ngokwesibonelo, njengokungathi iyisisekelo se-Time Capsule noma i-password ejwayelekile. Kunoma ikuphi sizobona ukuthi ohlangothini lwesobunxele kumakiwe Izikhiye> Ukungena ngemvume futhi ngezansi ngezigaba sizoyishiya in Amaphasiwedi, ngale ndlela sizobheka Ekilasini okuthile okufana nalokhu Iphasiwedi yesiteshi noma iphasiwedi yediski yesikhumulo sezindiza.
Lapho sesikutholile ukungena njengoba kukhonjisiwe emfanekisweni, kufanele sichofoze kabili ukuze sikuvule bese uya ku- Khombisa inkambu yephasiwedi lapho sizobe sesicelwa khona iphasiwedi yomlawuli ukuze kuthi lapho singena kuyo ivele.
Imininingwane engaphezulu - Ukufinyelela kwe-Keychain, okungaziwa kakhulu
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Izesekeli » Phinda uthole iphasiwedi yesizinda sakho sezindiza
Sawubona Miguel, ngiyabonga kakhulu ngosizo engikwazi ngalo ukubona iphasiwedi ye-Time Capsule yami
Kuhle kakhulu, ngiyabonga !!!
Bangisindise isikhathi esiningi esichithekayo !!!
UJulie Mujica kusho
Uma i-keychain yami ingalondolozanga. Ngizamile okuningi ukhiye ebenginesiqiniseko sokuthi yiwo futhi awusebenzi! Ngiphelelwe yithemba manje ... ayikho indlela yokutakula?
UMARIA IZIMBALI kusho
EKUSENI KAKUHLE, KONKE OKUPHELELE KWAKUPHELELE FUTHI NGIZOTHOLA UKUGUQULA IPHASwedi, NGIYABONGA KAKHULU
Phendula ku-MARIA FLOR
Ngiyabingelela futhi uma nginayo emawindini ukuthi ungayenza kanjani le nqubo ngiyabonga
Iphrojekthi entsha ethokozisayo ivela kuKickstarter: bind
Hlanza iMemori Disk mahhala izinsuku ezimbalwa ku-App Store